मत खरिदबिक्री नगर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको चेतावनी !
धुलिखेल । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले जनताको अमूल्य मतलाई खरिदबिक्री अर्थात् वस्तु विनिमयको साधनजस्तो नबनाउन राजनीतिक दलसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
टे«ड युनियनको दबाबमा कसैलाई पनि चुनावमा नखटाउन मुख्य निर्वाचन अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला निर्वाचन अधिकारीलाई निर्देशन दिँदै डा. यादवले निर्वाचनमा गलत कार्य गर्ने जोसुकैलाई पनि कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
यसैगरी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले मङ्गलबार सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सदरमुकाम चौतारास्थित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आकस्मिक अनुगमन गर्नुभएको छ ।
चैतारामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम कात्तिक २५ गतेबाट सुरु हुने र निर्वाचनमा सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गरिएको बताउनुभयो । दलहरूले निर्वाचनको स्वामित्व ग्रहण गरिसकेकाले निर्वाचन प्रचारप्रसार तथा मतगणना जस्ता कार्य पनि शान्तिपूर्ण रूपमा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अाजकाे गाेरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।